Xiisaha iimaylka xiisaha leh > Vielhuber David
Xiisaha iimaylka xiisaha leh09
Miyay tahay in magacyada domain iyo cinwaanada emaylku had iyo jeer noqdaan kuwo yaryar si loo hubiyo inaad gaadhay meesha aad rabto inaad tagto? Mise taasi gebi ahaanba khusayso? Tusaale ahaan, adeegaha boostada ee Google waxay leeyihiin goobo xiiso leh oo leh saameyn xiiso leh, oo aan si kooban ugu soo bandhigi doono maqaalka soo socda.
Google, oo dhawaan bilawday inay siiso cinwaanada @ gmail.com adeegsadayaasha Jarmalka, waxay iska indhatirtaa xilliyada hore ee qaansooyinka iyo hingaadigu mid aan xasaasi ahayn Cinwaannada emayllada soo socdaa sidaas darteed gebi ahaanba waa la mid:
Heerka RFC 2821 wuxuu qeexayaa sida tan sida caadiga ah wax looga qabanayo:
Tan macnaheedu waxa weeye in magaca domain ee ka dambeeya daanyeerku uu yahay mid aan xasaasi ahayn oo qaybta maxalliga ah ka hor inta daanyeerku aanu xasaasi ahayn. Xaaladaha badankood, si kastaba ha noqotee, server-yada waraaqaha ayaa aad u dulqaad badan. Waxaan kugula talinayaa inaad had iyo jeer qorto cinwaannada emaylka iyo magacyada domain ee kiisaska hoose.
In yar oo dhinac ah: Waxaad sidoo kale ku dari kartaa cinwaan dheeri ah tooska hore ee @, kaas oo la iska indhatiri doono inta lagu guda jiro gudbinta (oo markaa loo isticmaali karo, tusaale ahaan, shaandhaynta ku saleysan sharciga ee emaylka):